Global Voices teny Malagasy · Febroary 2011
Tantara misongadina tamin'ny Febroary 2011
Afrika Mainty28 Febroary 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana28 Febroary 2011
Tantara tamin'ny Febroary, 2011
Yemen 28 Febroary 2011
Ny Filohan'i Yemen, Saleh dia nanomboka nandefitra tamin'ireo mpanohitra, tamin'ny fanomezana baiko ireo hery fiarovana ny mba hiarovana ny mpitolona. Nefa toa tsy vonona ny handray izany teniny izany ny ankamaroan'ny olona. Mandritra izany, mitohy ireo tolona goavana manohitra ny fitondràna. Mety ho voatsapa ny fahatsaram-panahin'ny governemanta amin'ny diabe nomanin'ny mpiaro ny fitondràna any amin'ny renivohitry ny firenena amin'ny Zoma.
Bahrain: Ny “meme”-n'ilay lehilahy nihiaka TAKBEER
Vokatra tsy nampoizina tamin'ireo hetsi-panoherana nandritra ny Andron'ny Fahatezerana izay mbola mitohy any Bahrain, niara-nivondrona ireo mampiasa ny media sosialy ary namorona ny "meme" voalohan'i Bahrain : ilay lehilahy nihiaka "TAKBEEER"